‘पर्स भेटीए खवर गरौँला, पैसाको माया मारीदिनुहोस’
‘पर्स भेटीए खवर गरौँला, पैसाको माया मारीदिनुहोस’
कुरो गत अश्विन आठ गते सोमबारको हो । श्रीमतीलाई मेडिसिन ओपिडी र छोरालाई डर्माटोलोजी ओपिडीमा जँचाउनु पर्ने थियो । भिड अत्याधिक थियो , म ओपिडी कार्ड दर्ता गराउँन प्रयासरत थिँए ।
कठिन संघर्ष पश्चात दुवै ठाउँमा बिरामी कार्ड दर्ता गराए पछी पालो नम्बर प्राप्त गरे संगै आधुनिक महाभारतमा विजय हासिल गरेको अनुभुति भयो । स्वच्छ हावा खान करिडोरको अलि माथि खुल्ला ठाँउमा आउने बितिकै छोराले पानि पिउने इच्छा जाहेर गर्यो । जा पानि लिएर आइज भनेर यसो पेन्टको पछाडीको गोजिमा पर्स छामेको , आफू त खर्ल्यांमखुर्लुम पो भएँ ।
अघि त्यो पैतालिस छयालिस साल तिरको सिनेमाको फर्ष्ट डे फर्ष्ट सोमा हुने जस्तो भिंड भित्र कुन महारथिले मेरो मोटो र वजनदार पर्स उडाइदिसकेको रहेछ ।यो सायद मेरो मात्र कथा हैन होला , कैयौं बिरामीका आफन्तहरूको बिरामीलाई निको बनाएर घर फर्काउने सपना यस्तै घटनाले टुक्रीसकेका होलान र कैयौं बिरामीहरूको जिजिविषा हठात ब्रम्हनालमा सुत्न पुगे होलान ।
अत्याधिक भिडभाड हुने यस्ता स्थानहरूमा कीन कुनै सेकुरिटी छैन रु यति धेरै संवेदनशील कुरामा प्रतिष्ठान उदासीन रहन मिल्छ र रु किन यस्ता अत्याधिक जनचाप हुने क्षेत्र सिसिटीभीको निगरानिमा छैन ?
के धरानका सचेत हुँ भन्ने संघ संस्था र नागरिक समाज यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार , राजनीति र नियुक्तिमा मात्र सकृय हुने बोल्ने ? यस्ता कुरामा चै बोल्नु पर्दैन ? यहाँ भित्रैका कर्मचारी , डाक्टरजी र नर्सहरूका संगठनले चै यस्तोमा बोल्दा आकाश खस्छ र ?
अन्तमा निराशाका बावजुद झिनो आशा लिएर इमर्जेन्सी भित्र रहेको प्रहरीलाई आफ्नो पिडा जाहेर गरें । मेरो नाम , ठेगाना र फोन नम्बर सहित मेरो कुरा रजिस्ट्ररमा टीपे पछी प्रहरीको अझ गैर जिम्मेवार उत्तर सहित आशा मारेर घर फर्के । प्रहरीको भनाई यहाँ जस्ताको तस्तै ‘अब तपांईको पर्स भेटीयो भने खवर गरौला , तर पैसाको चै माया मारीदिनुहोस ।’